खुसीको खबर: भद्रगोलबाट चर्चा कमाएकि अभिनेत्री तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्दै ! | मनोरंजों
April 9, 2021 NepstokLeaveaComment on खुसीको खबर: भद्रगोलबाट चर्चा कमाएकि अभिनेत्री तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्दै !
काठमाडौं – हाँस्य टेलसिरियल भद्रगोल र सक्कीगो नी बाट चर्चामा आएकी अभिनेत्री तथा मोडल रक्षा श्रेष्ठ आमा बन्ने तयारीमा छिन् । लामो समय देखि हाँस्य टेलसिरियल र म्युजिक भिडियोमा व्यस्त रहेकी रक्षा गर्भवती भएकै कारण कलाकारिताबाट ब्रेक लिने बताइएको छ । अघिसम्मकि ‘मोडल रक्षा श्रेष्ठ’ अहिले ‘भद्रगोलकि रक्षा’को नामले परिचित छन् ।
विगत डेढ वर्षदेखि हास्य टेलिशृंखला भद्रगोलमा आवद्ध भएपछि उनको परिचय फेरिएको हो । परिचय मात्र फेरिएको छैन, उनको चर्चा पनि चुलिएको छ । हुन त भद्रगोलमा आउनुअघि उनले दुई दर्जनभन्दा बढी विज्ञापनमा मोडलिङ गरिसकेका थिइन् भने केही म्युजिक भिडियो र र्याम मोडलिङमा पनि उनको जादु चलेको थियो । उनी अब पुनः प्रशारण हुन लागेको ‘सक्किगो नि’ मा नदेखिन सक्ने बताइएको छ ।
सुटुक्क विबाह गरेकी रक्षा आमा बन्न लागेको कुरा हालै एक युट्युव अन्तरवार्तामा सक्कीगो नी टिमले खुलाएका थिए । करिब १ सय भन्दा बढी म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी रक्षाले ६५ भन्दा बढी विज्ञापनमा अभिनय गरेकी छिन् । हाँस्यसिरियल सक्कीगो नी मा पनि रक्षा र जिग्रीको जोडीलाई दर्शकले निकै मनपराएका थिए ।
तिहारमा टिका लगाउने दाइसंग बहिनि भागेपछि… वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएका थुप्रै युवाका घर उजाडीएका कथा अहिले बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । घरमा श्रीमतीलाई विश्वास गरेर खाडीमा पसिना बगाएर कमाउन भासिएका युवाहरु घर फर्कदा न घर हुन्छ न त विश्वास गरेकी श्रीमती । फेरी यहाँ त्यस्तै अर्को कथा प्रस्तुत गर्न लागिएको छ । श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारमा थिए । श्रीमान घर आए लगत्ती उनको श्रीमती भने आफैले भाई मानेर तिहारमा टिका लगाएको भाईसंग भागेकी छन् ।
उनी भागीसकेपछि अहिले मिडियामा आएकी छन् । उनले आफ्नो नाम र परिचय पनि नखुलाईदिन आग्रह गरेकी छन् । श्रीमान किशोर आचार्यले त्यसरी दिदी मानेको महिलालाई नै लिएर हिडेपछि उनले अब विगत कोट्याएर बस्न नसक्ने बताएकी छन् ।
उनले आफुलाई किशोरले झुक्याएर विवाह गरेको र आफ्नो दिदीको घर भनेर एउटा घरमा लगेका थिए । उनले आफ्नो जिवनलाई अगाडी बढाइसकेका कारण त्यस विषयमा कुरा पनि गर्न नचाहेको बताएकी छन् ।
उनले आफन्तले ऋषीलाई का’नुनी कठघरमा ल्याउन सुझाव दिएको भएपनि आफुले कदम नचालेको बताइन् । यो विषयलाई लिएर सवाल जवाफ गर्दै मिडियामा आउँदा आफ्नो भविष्यलाई पनि स’मस्या पर्ने भएकाले त्यस्तो नगर्ने बताइन् ।
यो बर्ष ४ फिल्म रिलिज, तर आएनन् दर्शक